Xogta & Dhaqanka Shirkadda - Longou International Business(Shanghai) Co., Ltd.
Horumarinta & suuq-geynta shabakadda
Longou International Business (Shanghai) Co., Ltd. waxaa la aasaasay sannadkii 2007 oo ku yaalla xarunta dhaqaalaha-Shanghai.Waa soo saaraha kiimikada lagu daro dhismaha & bixiyaha xalalka dalabka oo ay ka go'an tahay bixinta qalabka dhismaha & xalalka macaamiisha caalamiga ah.
Ka dib in ka badan 10 sano oo horumarineed iyo hal-abuurnimo joogto ah, LONGOU INTERNATIONAL waxa ay ballaadhinaysay miisaankeeda ganacsi ilaa Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Yurub, Ameerika, Australia, Afrika iyo gobollada kale ee waaweyn.Si loo daboolo baahida gaarka ah ee macaamiisha ajnabiga ah ee sii kordheysa iyo in si wanaagsan loogu adeego macaamiisha, shirkaddu waxay samaysay wakaalado adeeg oo dibadda ah, waxayna la samaysay wada-shaqeyn ballaaran wakiilada iyo qaybiyeyaasha, si tartiib tartiib ah u samee shabakad adeeg caalami ah.
LONGAU INTERNATIONAL wuxuu ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta Cellulose ether (HPMC, HEMC, HEC) iyo budada polymer dib loo cusboonaysiin karo iyo waxyaabaha kale ee lagu daro warshadaha dhismaha.Alaabooyinku waxay daboolayaan darajooyin kala duwan waxayna leeyihiin noocyo kala duwan oo alaab kasta ah.
Codsiyada waxaa ka mid ah hoobiyeyaasha drymix, shubka, dahaarka qurxinta, kiimikooyinka maalinlaha ah, goobta saliidda, khadadka, dhoobada iyo warshado kale.
LONGOU waxay siisaa macaamiisha caalamiga ah alaab tayo sare leh, adeeg fiican iyo xalalka ugu fiican ee qaabka ganacsiga ee badeecada + tignoolajiyada + adeegga.
Waxaan siinaa adeega soo socda macaamiisheena
Baro sifooyinka alaabta tartame.
Ka caawi macmiilka si uu u helo buundada u dhigma si degdeg ah oo sax ah.
Adeegga qaabaynta si loo hagaajiyo waxqabadka iyo xakamaynta qiimaha, iyadoo loo eegayo macmiil kasta xaaladdiisa cimilada gaarka ah, ciidda gaarka ah iyo guryaha sibidhka, iyo caado shaqo oo gaar ah.
Waxaan haynaa shaybaadhka Kiimikada iyo Codsiga labadaba si loo hubiyo in dalab kastaa ku qanacsan yahay:
Shaybaarada kiimikadu waa inay noo oggolaadaan inaan qiimayno guryaha sida viscosity, huurka, heerka dambaska, pH, waxa ku jira methyl iyo kooxaha hydroxypropyl, shahaadada beddelka iwm.
Shaybaarka codsigu waa inuu noo ogolaado inaanu cabbirno wakhtiga furan, haynta biyaha, awooda xabagta, caabbinta silbashada iyo sag, dejinta wakhtiga, shaqaynta iwm.
Adeegyada macaamiisha luqadaha badan:
Waxaan ku bixinaa adeegyadayada Ingiriis, Isbaanish, Shiine, Ruush iyo Faransiis.
Waxaan haynaa muunado iyo muunado miiska laga soo saaro qayb kasta si loo xaqiijiyo waxqabadka alaabtayada.
Waxaan ilaalineynaa habka saadka ilaa dekedda loo socdo haddii macaamiishu u baahan yahay.
Muujinta awoodda wax soo saarka shirkadda
Longou International Business (Shanghai) Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2007 oo ay soo saaraysay qalab kiimiko dhismaha muddo 14 sano ah.Waxaan leenahay warshado noo gaar ah oo khad kasta oo wax soo saar leh oo warshadeenu waxay isticmaashaa qalabka dibadda laga keeno.Hal nooc oo badeeco ah, waxaanu buuxin karnaa ilaa 300 oo tan hal bil.
Soo saarista tignoolajiyada iyo tijaabinta
Kooxda R&D ee xoogan, dhamaantood waxay khabiir ku yihiin kiimikooyinka dhismaha waxayna khibrad u leeyihiin arimahan.Dhammaan noocyada mashiinnada tijaabada ee shaybaadhkayaga kuwaas oo buuxin kara tijaabooyinka kala duwan ee cilmi-baarista alaabta.
Shirkadda waxaa aasaasay Mr. Hongbin Wang magaca shirkadda ee Shanghai Rongou Chemical Technology Co., Ltd. Oo bilaabay in ay la tacaalaan ganacsiga dhoofinta.
Shaqaalaheenu waxay gaadheen in ka badan 100 shaqaale ah.
Magaca shirkadu wuxuu u beddelay Longou International Business (Shanghai) Co., Ltd..
Shirkaddayadu waxay aasaastay shirkad laan ah Puyang Longou Biotechnology Development Co., Ltd.
Waxaan bilownay inaan dhisno warshad cusub oo soo saarta emulsion--HANDAO Chemical.
LONGAU INTERNATIONAL waxa hadda haysta in ka badan 100 shaqaale ah in ka badan 20% waxay haystaan ​​shahaadada Masters ama Doctor's.Intii uu hogaaminayey gudoomiye Mr. Hongbin Wang, waxa aanu noqonay koox bisil oo ka mid ah warshadaha waxyaabaha lagu daro dhismaha.Waxaan nahay koox dhalinyaro iyo xubno firfircoon oo ay ka buuxaan xamaasad shaqo iyo nolosha.
Horumarkayaga waxaa taageeray dhaqanka shirkadaha sanadihii la soo dhaafay.Waxaan si buuxda u fahamsanahay in dhaqankeeda shirkadu uu ku dhismi karo oo keliya saamaynta, dhexgelinta iyo is-dhexgalka.
Himiladayada:Dhismayaal ka dhig kuwo badbaado leh, tamar badan, oo qurux badan;
Falsafada ganacsiga:adeeg hal-joojin ah, habayn shaqsiyeed, oo ku dadaal in aad u abuurto qiimaha ugu weyn mid kasta oo macaamiisheena ah;
Qiimaha asaasiga ah:marka hore macmiilka, shaqo kooxeed, daacadnimo iyo aaminaad, heer sare;
Ruuxa kooxda:riyo, xamaasad, xilkasnimo, naf-hurid, midnimo iyo loolan aan macquul ahayn;
Aragtida:Si loo gaaro farxadda iyo riyooyinka dhammaan shaqaalaha LONGAU INTERNATIONAL.
Muujinta xoogga bandhigga
Noqo 100% masuul ka ah cabashada tayada leh, 0 arrin tayo leh ee macaamilkayaga hore.
Boqolaal badeecooyin ah oo heerar kala duwan ah ikhtiyaarkaaga.
Muunado bilaash ah (gudaha 1 kg) ayaa la bixiyaa wakhti kasta marka laga reebo khidmadda side.
Wixii su'aalo ah waxaa looga jawaabi doonaa 12 saacadood gudahood.
Si adag u xulashada alaabta ceeriin.
Qiimaha macquulka ah & tartanka, gaarsiinta waqtiga.